Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး)
Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ကဘာလဲ။
Generic Name: Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Vaccine MMR ဟာ ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုးရောဂါ ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပြီး အသက် တစ်နှစ်က ခြောက်နှစ်အတွင်း ကလေးတွေ နဲ့ ကာကွယ်ဆေး တခါမှ မထိုးဖူးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဒီရောဂါတွေ တခါမှ မဖြစ်ဖူးတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ အဆိုပါ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ထိုးနှံပေးနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပမာဏအနည်းငယ် ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်း ပမာဏအနည်းငယ်ကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ထိတွေ့စေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆိုပါရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှ ထိုးရင်တော့ ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုမှ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခြားသော ကာကွယ်ဆေးများနည်းတူ vaccine MMR ဟာလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူအားလုံးကိုတော့ ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် ထိုးနှံပေးရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးခန်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံမှာ ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးကို အကြိမ်ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးအသက် ၁၂လကနေ ၁၅လအတွင်းမှာ ပထမအကြိမ် ထိုးရမှာဖြစ်ပြီး အစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးတွေကို အသက် ၄နှစ်နဲ့ ၆နှစ်ကြားမှာ ထိုးရမှာ ဖြစ်ကာ တကြိမ်နဲ့ တကြိမ်ကြားမှာ အနည်းဆုံး ၂၈ရက် (လေးပတ်လောက်) ခြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၅၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုးရောဂါ တခါမှ မဖြစ်ဖူးရင် ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ဆေးတခါမှ မထိုးဖူးရင် ဒီကာကွယ်ဆေးကို အနည်းဆုံး တကြိမ်တော့ ထိုးထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစုလိုက်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုတွေဟာ ဒေသတခုနဲ့တခုပေါ်မူတည်ပြီး ထိုးရမယ့် အသက်အရွယ်အနည်းငယ် ကွာဟမှုရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးဌာနတွေက ချမှတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး ၂၄နာရီအတွင်းမှာ ခံစားရနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ နာကျင်ခြင်းနဲ့ အဖျားတက်ခြင်းတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် အက်စ်ပရင်မပါဝင်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ (ဥပမာ acetaminophen (Tylenol) သို့မဟုတ် ibuprofen (Motrin, Advil) တို့ကို သုံးစွဲဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။သုံးစွဲရမယ့် ပမာဏနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးညွှန်း ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို အတိအကျ လိုက်နာရပါမယ်။
သင့်မှာ အတက်ရောဂါရှိနေရင် အဖျားမတက်ဖို့ ကာကွယ်ရေးဟာ အထူးပင် အရေးကြီးလှပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး ၆ပတ်လောက်အတွင်းမှာ တီဘီရောဂါအတွက် အရေပြားစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တဲ့အခါ မှားယွင်းတဲ့ ရလာဒ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ လေးပတ်မှ ခြောက်ပတ်အတွင်း ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုးကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးထားရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးရပါမယ်။
Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ကာကွယ်ဆေးကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ 2–8°C အတွင်း သိုလှောင်နိုင်သလို freezer ထဲမှာ -50°C to -15°C အတွင်းလည်း သိုလှောင်နိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးနဲ့ရောနှောရမယ့် diluent အရည်ကိုတော့ အေးခဲမထားသင့်တဲ့အတွက် ရေခဲသေတ္တာထဲ ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်မှာပဲ ထားရပါမယ်။တကယ်လို့ MMR ကာကွယ်ဆေးကို ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပါ ပေါင်းပြီး လေးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး (ProQuad, Merck) အဖြစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ freezer ထဲမှာ -50°C to – 15°C အတွင်း ကျိန်းသေပေါက် သိမ်းဆည်းထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ရေမပြည့်ဖူးဆိုရင် အာနိသင်ထိရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြိမ်ရေအတိုင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။အနည်းငယ် အအေးမိတာမျိုးဖြစ်နေချိန်မှာလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အဖျားကြီးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း စတာတွေကို ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှသာ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ပါတယ်။ပထမတကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ပြဿနာမျိုး ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးကို ထပ်မထိုးသင့်ပါဘူး။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ ဘေးထွက်လက္ခဏာတွေ အကုန်လုံးကို မှတ်သားထားပြီး အစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှာ အဆိုပါ လက္ခဏာတွေ (ရှိခဲ့ရင်)ကို ဆရာဝန်အား ပြန်လည်ပြောပြပါ။ဒါပေမယ့် ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုးစတဲ့ ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံရခြင်းဟာ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထက် များစွာပိုမိုဆိုးရွားတယ်ဆိုတာ သိထားရပါမယ်။အခြားသော ဆေးဝါးများနည်းတူ ဒီကာကွယ်ဆေးဟာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အင်မတန်ဖြစ်ခဲပါတယ်။အောက်ဖော်ပြပါ အရာတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်ရင် MMR ကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါဘူး။
Neomycin ပါဝင်သော ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ။
ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင် သို့မဟုတ် ဂျိုက်သိုးပါဝင်တဲ့ မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးမဆို။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုးကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါဘူး။ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်မှသာ ထိုးရပါမယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး သုံးလအတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်မရှိအောင် နေထိုင်ရပါမယ်။တကယ်လို့ သင်ဟာ ကလေးနို့တိုက်နေရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို မတိုင်ပင်ဘဲ ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုးကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါဘူး။
Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုးစတဲ့ ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံရခြင်းဟာ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထက် များစွာပိုမိုဆိုးရွားပါတယ်။အခြားသော ဆေးဝါးများနည်းတူ MMR ကာကွယ်ဆေးဟာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်တာတော့ အင်မတန်ရှားပါးပါတယ်။အောက်ဖော်ပြပါ ဓာတ်မတည့်လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူရပါမယ်။
မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းတို့ ဖောရောင်ခြင်း။
အောက်ပါ ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ပြသပါ။
အဖျားကြီးခြင်း (ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး နာရီအနည်းငယ်အကြာ သို့မဟုတ် ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်)။သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်လက္ခဏာတွေကတော့
ဝမ်းလျှောခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine MMR ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓာတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးတွေကတော့
စတီးရွိုက်ဆေးများ (သောက်ဆေး၊နှာခေါင်းဖြန်းဆေး၊ရှုဆေး၊ထိုးဆေး ပုံစံအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)။
psoriasis ရောဂါ၊rheumatoid အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် ခုခံအားစနစ်ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်းကြောင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်က တစ်ရှုးတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးဝါးတွေ (ဥပမာ azathioprine (Imuran), etanercept (Enbrel), leflunomide (Arava) စသည်)။
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အစားထိုးတဲ့အခါ အစားထိုးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်က တိုက်ထုတ်ပစ်မှာကို ကာကွယ်ဖို့၊ကုသဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးတွေ (ဥပမာ basiliximab (Simulect), cyclosporine (Sandimmune, Neoral, Gengraf), muromonab-CD3 (Orthoclone), mycophenolate mofetil (CellCept), sirolimus (Rapamune), သို့မဟုတ် tacrolimus (Prograf))။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အထက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကို သုံးစွဲနေမယ်ဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ မသင့်တော်တဲ့အတွက် ဒီဆေးတွေရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှသာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Vaccine MMR က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine MMR ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓာတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ ဥပမာ
ပန်းနာရင်ကျပ်ကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါများ သို့မဟုတ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ။
ကင်ဆာ၊HIV၊AIDS စသည့် ရောဂါများ၊စတီးရွိက်ကဲ့သို့သော ဆေးများ၊ဓာတ်ကင်ခြင်း၊ကင်ဆာဆေးသွင်းနေရခြင်းတို့ကြောင့် ခုခံအားစနစ်ကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခြင်း။
သွေးမွှားဥများ ပျက်စီးသောရောဂါ (သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း၊အလွယ်တကူ သွေးယိုစီးခြင်း)။
တီဘီရောဂါ လတ်တလော ခံစားနေရခြင်း။
ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေသော ရောဂါများရှိခြင်း (သို့မဟုတ် ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးစဉ်က ဓာတ်မတည့်သော လက္ခဏာများ ပြခြင်း)။
ရောဂါများ၊ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၊အချို့သော ဆေးများ သို့မဟုတ် ကင်ဆာဆေးများကြောင့် ခုခံအားနည်းနေခြင်း။
တနှစ်အတွင်း သွေး သို့မဟုတ် သွေးတွင်ပါဝင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းတခုခုကို သွင်းဖူးခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပါးချိတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်အတွက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၀.၅ စီစီကို အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် တကြိမ်ထိုးရပါမယ်။
ဂျိုက်သိုးရောဂါ ကာကွယ်ရန်အတွက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၀.၅ စီစီကို အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် တကြိမ်ထိုးရပါမယ်။
ဝက်သက်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်အတွက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၀.၅ စီစီကို အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် တကြိမ်ထိုးရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၁နှစ်နဲ့အထက် ကလေးတွေမှာ ပါးချိတ်ရောင်ရောဂါကို ကာကွယ်ရန်အတွက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၀.၅ စီစီကို အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် တကြိမ်ထိုးရပါမယ်။
အသက်၁နှစ်နဲ့အထက် ကလေးတွေမှာ ဂျိုက်သိုးရောဂါကို ကာကွယ်ရန်အတွက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၀.၅ စီစီကို အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် တကြိမ်ထိုးရပါမယ်။
အသက်၁နှစ်နဲ့အထက် ကလေးတွေမှာ ဝက်သက်ရောဂါကို ကာကွယ်ရန်အတွက် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၀.၅ စီစီကို အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် တကြိမ်ထိုးရပါမယ်။
Vaccine Mmr (ဝက်သက်၊ပါးချိတ်ရောင်၊ဂျိုက်သိုး ကာကွယ်ဆေး) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
vaccine MMR ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
တခါထိုးစာ ၀.၅ စီစီ ပါဝင်သော ဆေးပုလင်း။
ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ ရက်ကျော်သွားရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။သတိရရချင်းမှာ နောက်တကြိမ်အတွက် ထိုးပါ။အစ က ပြန်ထိုးစရာ မလိုပါဘူး။သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြိမ်ရေအတိုင်း ကာကွယ်ဆေးကို ပြည့်အောင်ထိုးပါ။အကြိမ်ရေမပြည့်ရင် ကာကွယ်ဆေးအာနိသင်ကို အပြည့်အဝ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
https://www.drugs.com/mtm/measles-mumps- and-rubella- mmr-vaccine.html.
Accessed November 11, 2016
MMR Vaccine (Measles, Mumps, and Rubella).
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601176.html. Accessed November 11,
http://www.immunize.org/askexperts/experts_mmr.asp. Accessed November 11,
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောကျတိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇနျနဝါရီ 24, 2018
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ထိုးထားသင့်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ